မီးငယ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: မီးငယ်နဲ့ YUFL
ဂျပန်စာပထမနှစ်ကို UFL မှာ တက်နေရင်းနဲ့ မီးငယ် တဖက်က နေ BE ဘွဲ့ကို ယူဖို့လုပ်ရပါတယ်။ နှစ်ဖက်လုံးကို အပျက်မခံချင်တဲ့ မီးငယ် ပင်ပန်းတော့တာပါပဲ။ UFL က ကမာရွတ်မြို့နယ်ထဲမှာ ရှိပြီး ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။ တခုသက်သာသွားတာက ကျောင်းရှေ့မှာ ကားသေးသေးလေးတွေ ပြေးဆွဲနေတာ ရန်ကင်းထိ ရှိပါတယ်။ မီးငယ်ကတော့ အကိုတယောက်ရဲ့ ကားနဲ့ နေ့တိုင်းတာမွေထိ လိုက်ပို့ပေး တာမို့ ကျောင်းကို အဆင်ပြေပြေတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းချိန်ကို ၁၅ မိနစ်လောက်စောထွက်လို့ တာမွေကို ကားနဲ့သွား ပြိးရင် သန်လျင်ကျောက်တန်းကားလေးကို စီးရပါတယ်။ တခါတလေလည်း တွယ်တောင်စီးရတဲ့ အခါမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ( YUFL အကြောင်းပါဆို ဟိုဘက်ကျောင်းရောက်သွားပြန်ပြိ :D )
မီးငယ်နေတဲ့ အိမ်က ဗိုလ်တထောင်မှာမို့ ၄၈ ကားလေးဂိတ်ဆုံးနားမှာ ဆိုတော့ သွားရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ မနက် ၆ နာရီ ၄၅ ကနေ ၈နာရီ ၄၅ ထိ နှစ်နာရီပေမယ့် စာသင်ချိန် မများဘူးလို့ပြောလို့ရသလို တပတ်ကို ၅ ရက်မို့ မနည်းတော့လည်း မနည်းလှပါဘူး။ မီးငယ် ကျောင်းတက်ခဲ့ ရတဲ့ ကာလတလျှောက် ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ Kanji တွေကို ကြိုးစားရေးပြီး စာအုပ်ထပ်တိုင်း ဆရာတွေဆီက ပန်းပုံလှလှလေးတွေ ရရင် ဘယ်လိုပျော်မှန်းမသိတဲ့အတွက် ပိုပိုလှအောင် ကြိုးစားရေးပါတယ် ( နည်းနည်းလှရင် အ၀ိုင်းလေးက သေးတော့ သိပ်မကြိုက်တာလဲပါပါတယ် :D ) အခွင့်သင့်ရင်တော့ မီးငယ် အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ပါဦးမယ်။ :)
မီးငယ်အတွက် တခုကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတာက ကျောင်းသားတိုင်းကြောက်ကြတဲ့ ခန်းဂျီးကို မီးငယ်က ကြိုက်တာပါပဲ။ ခန်းဂျီးရေးရတာ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ လှတယ်လို့ ချီးကျူးခံရတာကို ပိုပျော်ပါတယ် :D ကျောင်းမှာလည်း စာသင်နှစ်တလျှောက် မီးငယ် အခန်း အီးစီ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဆရာမတွေကို တဖက်တလမ်းက ကူညီပေးချင်လို့ပါ။ သင်တန်းတွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က ပြင်ပသင်တန်းတွေမှာ တက်ကြတဲ့ ကျောင်းသားအများစုက ဂျပန်စာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအတွက် အဓိကထားပြီး တက်ကြပါတယ်။
မီးငယ်တို့ YUFL မှာကတော့ အဲ့ဒီလိုသီးသန့် သင်တာမျိုးမရှိပါဘူး ( Reading, Grammer, Words, Listening, VIVA ) ဆိုပြီး ၅ ဘာသာ ဖြေရပါတယ်။ ပထမနှစ်စာသင်သက် ၃ လကနေစလို့ စာမေးပွဲတွေကို စဖြေရပါတယ်။ ဗိုင်ဗာဖြေရတဲ့ နေ့ဆိုရင်တော့ မီးငယ်တို့ ချွေးတလုံးလုံးပေါ့လေ ( ကြောက်ပြီးရင်တုန်နေတာ :D ) ကျောင်းသားတိုင်းလိုလို ဗိုင်ဗာလို့ခေါ်တဲ့ နှုတ်ဖြေကို ကြောက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ သဘောကောင်းတဲ့ဆရာမ ၊ နည်းနည်းတင်းကြပ်တဲ့ ဆရာ အဲ့လိုမျိုး ကိုယ့်ဘာသာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆရာတွေကို သေချာစိုက်ကြည့်နေလို့ ကိုယ့်အလှည့်ဘယ်သူဖြစ်ပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းရတာလည်း အမောပါပဲ :D တကယ်တမ်းကျတော့ စာမေးပွဲ မဖြေခင်ထဲက အတန်းထဲမှာ အပတ်စဉ် ဗိုင်ဗာပုံစံမျိုးကို ဆရာတွေက လေ့ကျင့်ပေးပြီးသားပါ။ အဲ့ဒါလည်း စာမေးပွဲဆိုတဲ့ အရှိန်က ပါနေသေးတာပါပဲ။
တခြားဘာသာတွေ အဲ့ဒီလောက်မကြောက်ပါဘူး ( မသိလည်း ရမ်းတုတ်လို့ရတယ်လေ :D ) ဗိုင်ဗာကျတော့ ဆရာတွေရှေ့မှာ ငုတ်တုတ်လေး မှားသွားရင် အော်ခံရမှာလည်း ကြောက်ရသေးတယ် ( ကိုယ့်ဆရာ ဦးမင်းသုခ ရှေ့ဆုံးက :D ) ဆရာတွေကို ချစ်လည်းချစ် ကြောက်လည်းကြောက်ပါပဲ ( ချစ်ကြောက်ရိုသေ ဆိုတဲ့ထဲမှာ YUFL က ဆရာတွေ ပါပါတယ် ) ဆရာဆရာမတွေရဲ့ ချော့တခါ ချောက်တလှည့် သင်ပြပေးမှုတွေထဲမှာ မီးငယ် ဂျပန်စာကို ချစ်တတ်လာပါတယ်။ ဒါတောင် ပထမနှစ်တုန်းက ခန်းဂျီးဘာသာမှာ ပြောင်းပြန်တွေကြီးရေးလို့ အဆူခံခဲ့ရပါသေးတယ် အဟီး
ပြောင်းပြန်မှ တော်ရုံပြောင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူး ( ဥပမာ - （ちず）ဆိုပြီး ဟိရဂနပေးထားတာကို အမှန်ရေးရရင် 地図　ဒီစာလုံးပါ။ ဒါပေမယ့်မီးငယ်ရေးတာ အဲ့လိုမျိုး　(図地） ဟီးဟီး . ) စာမေးပွဲပြီး နောက်တနေ့ ဆရာက ရုံးခန်းလာတွေ့ဖို့ ခေါ်လို့ သွားတော့မှ အဆဲခံရတော့တာ .. ရေးထားတဲ့ ဆွဲချက်တွေ အကုန်မှန်ပြီး ခန်းဂျီးကို ပြောင်းပြန်ရေးလို့တဲ့လေ :( ဆရာတွေရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို အမြဲ အမှတ်ရနေပါတယ်။ မီးငယ်က အပြင်မှာလည်း မသင်နိုင်ပြန်တော့ ကျောင်းတခုထဲကိုပဲ အားကိုးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မီးငယ် ပထမနှစ်စာသင်နှစ်ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးလို့ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားဘ၀ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မီးငယ်တို့ကျောင်းမှာ Listening ( choukai ) ကို အပတ်စဉ်အဂါင်္နေ့တိုင်း လက်တွေ့ခန်းထဲကိုသွားလို့ ဗွီဒီယိုတကား ကြည့်ရပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဆရာက မေးခွန်းတွေပေးလို့ အိမ်စာအဖြစ် ဖြေရတော့တာပါပဲ။ သိပ်ခက်တဲ့ကားတွေဆို နားမလည်တာနဲ့ မီးငယ် ချာလည်ရမ်းတော့တာပဲ :D တော်ရုံကားတွေကိုတော့ နားလည်ပါတယ် ( ကိုယ်သတ်မှတ်တာ ဟိဟိ )
အဲ့ .. နားလည်ရဲ့သားနဲ့ ဒုက္ခရောက်တဲ့ ကားတွေကတော့ အများအားဖြင့် ဟာသကားတွေပါပဲ ( မီးငယ်က အရီသန်တယ်လေ ) လိုက်ရီနေတာနဲ့ အချက်အလက်တွေ ဘာမှမမှတ်လိုက်ရပါဘူး . တကယ်တမ်း ဆရာလည်း မေးခွန်းပေးရော စကားလုံးတွေ မမှတ်မိတာနဲ့ ချွေးပြန်တော့တာပါပဲ ( ဆရာပေးတဲ့မေးခွန်းတွေ ထဲမှာ သုံးသွားတဲ့ စာလုံးတွေကိုလည်း မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ပါပါတယ် ) ဟာသကားကို အစအဆုံး လိုက်ရီနေတာ ဘာမှကိုမမှတ်နိုင်တာပါ။ အဲ့ဒါဆိုလည်း အဆူခံရပြန်ရော :D
ဆရာကဆူလိုက် စာမေးပွဲက ဖြေလိုက် ကျောင်းကစာလေးတွေ ဟိုကျက်ဒီကျက်လုပ်လိုက်နဲ့ အဲ့ဒီနှစ် သူငယ်ချင်းတွေက ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ လယ်ဗယ် ၂ ၀င်ဖြေတဲ့အချိန် မီးငယ် လယ်ဗယ် ၃ ပဲ ဖြေခဲ့ပါတယ် :D တခါထဲ အောင်ချင်တာလည်း ပါသလို အပြင်သင်တန်းဘာမှမတက်ထားတော့ မေးခွန်းပုံစံတောင် သေချာမသိလို့ပါ။ ကျောင်းက ဖတ်စာအုပ်တွေနဲ့ အပြင်သင်တန်းတွဲတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအဖို့ အဆင်ပြေပေမယ့် မီးငယ်က ကျောင်းတခုပဲတက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိတာလည်းပါပါတယ် :D
ကျောင်းနှစ်ကျောင်းခွတက်နေတာလည်းပါပါတယ်။ မီးငယ် ဒုတိယနှစ်မှာတော့ BE ဘွဲ့လည်းရပြီး မာစတာ စတက်နေပါပြီ။ စာတွေများတာရယ်။ မီးငယ် အလုပ်လည်းစလုပ်နေပြီဆိုတော့ အချိန်တွေ ဘယ်လိုခွဲရမှန်းမသိအောင်ကို အလုပ်များခဲ့ပါတယ် ( မီးငယ်က လောဘလည်း အရမ်းကြီးတယ် လုပ်ချင်တာတွေ က တကယ့်ကိုများနေခဲ့တာလေ ) ဒါပေမယ့် မာစတာကို လှိုင်သာယာမှာ တက်ရပြီး UFL ကို ကမာရွတ် အလုပ်က MICT ထဲမှာဆိုတော့ မာစတာကို ဆက်မတက်နိုင်တော့ပါဘူး ( ဝေးတာတကြောင်း ကျောင်းတခုထဲနဲ့ အဆင်မပြေဘဲ ကျူရှင်ယူမှဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ပါလာတာတကြောင်း မို့ပါ ) ဒီလိုနဲ့ပဲ မီးငယ် YUFL Diploma Second Year ကျောင်းသူဘ၀ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
တတိယနှစ်ကိုရောက်လာပြန်ပေါ့။ တတိယနှစ်ကျောင်းသူဘ၀ကိုတော့ တပိုင်းတစနဲ့ပဲ မီးငယ် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ နောက်ပို့စ်တွေမှပဲ တင်ပါတော့မယ်။ ဆရာဆရာမ တွေကို မီးငယ်သတိရလွမ်းဆွတ်လျှက်ပါ။ ဆရာဆရာမတွေရဲ့ ကျေးဇူးတရားကို ဦးထိပ်ထားလို့ အမြဲ ရှိခိုး ကန်တော့လျှက်ပါ။ ကျောင်းတော်မှာ ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ အကို၊ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်း သတိရနေလျှက်ပါ။
Posted by မီးငယ် at 10:49 AM
အကိုလည်း ဂျပန်စာ နဲနဲတော့ တတ်တယ်။
ကာဝါဆာကီ ၊ အာဂျီနိုမိုတို၊
နာကာမူယာ ၊ နာကာတာ(ဘောလုံးသမား)
အကိုပိုင် သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး ကြွားသွား ( အဲလေ - ပြောသွား ) တာ ညီမလေး သဘောကျသွားတယ် ညီမလေးလည်း နည်းနည်း တတ်တယ် တရုတ်စာ ရှဲ့ရှဲ့နီ ခိခိ